प्रहरीसँगको ‘सेटिङ’मा नै झापामा गाईको... :: सुजिता कार्की :: Setopati
प्रहरीसँगको ‘सेटिङ’मा नै झापामा गाईको खुला तस्करी !
नियमन गर्ने निकायलाई नै आर्थिक प्रभावमा पारेर भारतीय तस्करले झापामा राष्ट्रिय जनावार गाईको अवैध तस्करी गर्ने गरेका छन्।
सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपालस्थित सशस्त्र प्रहरीलाई प्रति गोटा नेपाली १० र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीलाई भारतीय १० रुपैयाँ दिएपछि नेपालबाट जति पनि गाई निकासी गर्न पाएको तस्कर स्वयमले बताए।
नेपालबाट मासुका लागि गाईको निकासी प्रतिबन्ध छ। तर, प्रहरीलाई नगदले प्रभावमा पार्दै गाईको निकासी गर्ने गरेको पाइएको हो। गाई बाहेकका चौपाया निकासीका लागि सरकारले झापाका दुईवटा नाकालाई अख्तियारी दिएको छ। काकडभिट्टा नाका र भद्रपुर नाकाबाट गाई बाहेकका चौपाया निकासी गर्न पाइने कानूनी प्रावधान छ। ती बाहेकका नाकाबाट चौपाया निकासी गर्न नपाइने मेची भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत गडपति कँडेलले बताए।
उनले भने, ‘एउटा लगेपनि सयौं लगेपनि एक पटकमा ११३ रुपैयाँ भन्सार दाखिला गरेपछि नेपालबाट गाई बाहेकका चौपाया निकासी गर्न पाइने प्रावधान छ।’
भारतीय भूमिमा यतिबेला गाईको आयात निर्यात बन्द छ। दिउँसो नाका सुनसान भएपनि रातमा भने भारतीय तस्करले एसएसबीलाई भारु १० रुपैयाँ दिएपछि जतिपनि गाई गोरु लैजान सकिने भारतीय तस्कर सुरेन्द्र मुखियाँले बताए।
उनले भने, ‘धुलावारी हुँदै ज्यामिरगढीको विचार्नी बजारको नाकाबाट गाई गोरु निकासी हुने गरेको छ। योसँगै चौधरी टोल पनि अर्को मुख्य नाका हो।’
सोमबार मुखिया लगायतका केही भारतीय व्यापारीले धुलावारी चन्द्रगढी सडकबाट गाई र गोरु लगिरहेका थिए। उनीहरूले धुलावारीबाट ती पशु खरिद गरेको बताए।
‘यहाँबाट मेची खोलाको पूर्वी तटको कान्जी हाउसमा लगिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि रातको ९ बजे मेची नदी तारिने गरिएको छ।’
मुखियाँले खरिद गरेको गाई र गोरुको विक्री तथा खरिद नामा रसिदमा चौपाया लेखिएको छ । पशु क्वारेन्टाईन काकडभिट्टाका प्रमुख मुकेशकुमार सिंहले पशुको खरिद विक्री रसिदमा वकैदा चौपायाको हुलिया उल्लेख हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘भारतबाट नेपाल आयात गर्न र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न गाईको कानूनी जटिलता छ तर तस्करले मिलेमतोमा यस्तो अवैध धन्दा चलाइरहेका छन्। समाचार स्रोतका अनुसार पशुबजारबाटै सेटिङ सुरू हुन्छ। गाईलाई गाई नलेखेर चौपायामा दर्ज गरिन्छ। गाईलाई चौपाया लेख्नु नै तस्करसँगको मिलेमतो हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।’
चौपाया बजारबाटै प्रहरी प्रशासनसँग सेटिङको प्रस्थान विन्दु सुरू भएको गौ संरक्षण अभियानका अभियन्ताले बताए।
भारतीय व्यापारीले सिधै भने, ‘गाईलाई कागजमा गोरु भनेर लेख्यो भने जति पनि निकासी गर्न पाइन्छ। पुलिससँग सेटिङ मिल्यो भने नहुने त केही पनि छैन’, ती तस्करले भने।
‘जिल्लाका हरेक अवैध गौडामा गाई गोरू थुनेर राख्ने काज्जि हाउस छ। दिनभर भेला पार्‍यो रात परेपछि पारि टपायो’, ज्यामिरगढीकी कल्पना चौधरीले भनिन्, ‘दिउँसो ट्रक र हात्ती गाडिमा ल्याइन्छ रात परेपछि हुलका हुल पारि तारिन्छ।’
उनका अनुसार एक रातमा कम्तिमा १ सय गाई गोरुको अवैध तस्करी हुन्छ।
ठूला पशु बजारका रूपमा दरिएका जिल्लाका दमक , धुलावारी र घैलाडुव्बाबाट गाई खरिद गरेर व्यापारीले भारत निकासी गर्ने गरेको छन्। जिल्लाका कतिपय सहायक नाकाबाट ट्रकमै लोड गरेर गाई निकासी गरिन्छ भने त्यतिकै संख्या गाईलाई हिँडाएरै भारत निकासी गरिन्छ। झापाका नकलवन्दा, ज्यामिरगढी, पृथ्वीनगर, केचनाकवल, झापा बजार र गौरीगञ्ज नाकामा प्रशासनले अनुगमग नगर्दा जिल्लामा गाईको अवैध व्यापार फस्टाएको गौ संरक्षण अभियानका अभियन्ता नन्दकिशोर भारद्धाजले बताए।
‘नेपालमा गाईको आयात निर्यात गर्ने नपाई त होइन तर थारा, बुढा गाई भने निकासी गर्न नपाइने भन्सार अधिकृत कँडेलले बताए।
उनले भने, ‘भारतीय सीमामा सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेका त छन् तर नेपालमा तस्करी घटेको छैन। नेपाली बजारमा खरिद भएका गाई भारतीय बजारमा लगेर मासुका लागि विक्री गरिन्छ। तस्कर आफैँले अप्ठेरो नमानी भन्छन् भारतका दिल्ली, मुम्बई , आसाम , दार्जेलिङ, गान्तोक, सिलिगुढी लगायतका बजारमा नेपालका गाई पुर्‍याइन्छ।
व्यापारीले दमकमा खरिद गरेका गाई पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै झिलझिलेबाट शिवगञ्ज , कुन्जीबारी र महाभारा हुँदै डिगलबैंक निकासी गर्ने गरेका छन्।
घैलाडुव्बाको पशुबजारमा खरिद विक्री भएका गाई झापा गाँउपालिकाको झापा बजार हुँदै निकासी हुन्छ। भद्रपुरमा खरिद भएको गाई पृथ्वीनगरको कदमगाछिबाट निकासी हुन्छ। धुलावारी बजारमा खरिद विक्री भएका गाई नकलवन्दा, ज्यामिरगढीबाट निकासी हुन्छ। यी सबै नाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित छ। स्थानियबासीन्दा भन्छन् ‘सेटिङ बिना कसरी गाईको तस्करी हुन्छ र ? ईलाका प्रहरी कार्यालय गौरिगञ्ज, झापा बजार काकडभिट्टा रमिते बनेका छन्। प्रहरी चौकी नकलवन्दा, कुन्जिवारी, ज्यामिरगढी, केचना मात्र होइन सशस्त्र प्रहरीको प्रहरी ईकाई पनि रमिते बन्ने गरेका छन्।
तर, प्रहरीले आफूहरू रमिते नभएको जिकिर गरे। ‘नाकाबाट गाई तस्करी भएकै छैन,’ सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय झापाका प्रमुख रमेश सुवेदीले भने नाकामा हाम्रो गस्ती तैनाथ छ पत्याउनु नै कसरी ?’
भारतीय व्यापारीले नेपालका प्रहरीलाई नेपाली १० रुपैयाँ बुझाएको पनि उनले स्वीकार गरेनन्। ‘यदाकदा त्यस्तो भएको भए हामी निगरानी बढाउछौं’,उनले भने।
‘झापाका पशुबजारबाट खरिद विक्री भएका थारा र बुढा गाई ट्रकका ट्रक नाकाका गौडामा दिउँसै पुर्याइन्छ र राति निकासी गरिन्छ। ती गाई खोई त ?’ स्थानीयले प्रश्न गरे।
सीमा सुरक्षाका प्रमुख सुवेदीले अब नकलवन्दा, ज्यामिरगढी, पृथ्वीनगर, घेरावारी, झापा बजार, कुन्जिवारी र गौरिगञ्ज नाकामा कडाई गर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १४, २०७४, ०८:०३:३८